Famerenana sy fanamarihana momba ny geology iray amin'ny fahantrana nataon'i Nahúm Méndez - Ikkaro
firosoana >> boky >> Mpahay jeografia iray sahirana nataon'i Nahúm Méndez
Zavatra 2 no tiako asongadina.
Mandritra ny boky dia manasongadina anay izahay ary aseho ny maha-tokana ny jeolojia, ny astronomia ary ny toetrandro. Jeolojia sy toetrandro Ny vokatry ny zava-nitranga ara-jeolojika dia miovaova ny toetr'andro, fa ny fiovaovan'ny toetrandro koa dia miteraka loza ara-jeôlika
Ny famaritana ny fomba mety hahafoana ny dinôzôra. Toa andalana sy fanarenana tena mahaliana ahy io.
Fanazavana fohy momba ny vanim-potoana geolojika, farafaharatsiny amin'ireo izay nampiasaina tao amin'ilay boky. Indraindray izy miresaka amintsika momba ny eon ary amin'ny fotoana hafa momba ny taona, ny fotoana ary tonga hamitaka ahy izy. Angamba ny annex amin'ny farany miaraka amin'ity fampahalalana ity dia mety tsara.
Teboka iray izay tiako hijerena tsara miaraka amin'ny fampahalalana ivelany. Mamela fanamarihana vitsivitsy amin'ireo toko sy zavatra tsy tadidiko ary lohahevitra hafa hitadiavako amin'ny ho avy aho izao.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny maha-zava-dehibe ny ranomasina ianao dia jereo ny famerenana ny Tontolo manga nataon'i Sylvia A. Earle
Ny fananganana ny rafi-masoandro
Ny ampahany rehetra amin'ny fananganana ny rafi-masoandro sy ny planetantsika dia hazavaina tsara ihany koa ary miaraka amin'ny tombony anananao manana sary manaitra ao amin'ny laharana manokana Nationa Geographic
Manomboka amin'ny Big Bang ka hatramin'ny fananganana ny rafi-masoandro mifototra amin'ny fanangonana ireo singa amin'ny alàlan'ny fisarihana gravitational izay mahatonga azy ireo amin'ny faritra matevina indrindra mifangaro, mamorona meteors kely izay mifandona mandra-pahazoany be dia be. izany ao amin'ny atiny dia manomboka miangona, manambatra ary mamorona singa bebe kokoa.
Azavao ny karazana planeta isan-karazany ao amin'ilay rafitra, be vato sy gazy, ary ny antony isian'izy ireo
Ny Kuiper Belt ary ny Oort Cloud. Oort, eo anelanelan'ny Mars sy Jupiter. ny ankamaroan'ny vatana dia vato sy metaly
Ny asterôida lehibe indrindra dia i Ceres misy savaivony efa ho arivo kilometatra
Ny Kuiper any ankoatry ny orbit Neptune dia vita amin'ny ranomandry.
Ny fananganana ny tany sy ny volana
Ny fananganana ny tany dia mitovy amin'ny planeta hafa amin'ny rafi-masoandro. Azavao fa ny tany dia nanana peratra sy ireo teôria telo eken'ny besinimaro momba ny fananganana ny volana, fission, hoy i George Darwin, zanakalahin'i Charles Darwin tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Ny iray amin'ny fisamborana ary iray amin'ireo fiantraikany lehibe izay ekena indrindra
Ilay loza vy nitranga rehefa nihoaran'ny 1538ºC ny tany, ny hafanana miempo vy. Ny planeta dia tao anaty fanjakana viscous ary nilentika tao anatin'ny fotony ireo singa mavesatra.
Maharitra 4.000 miliara taona, 90% amin'ny tantaran'ny Tany
James hutton, mahatsapa fa ny mizana ara-jeôgrafika dia lehibe kokoa ary ny vanim-potoana teto an-tany nalaina tamin'ny lahatsoratra ara-baiboly dia tsy mandeha
Avy amin'ny taratra radiometrika izay manararaotra ny fahatapahana sy ny isotopso, manomboka isaina ny soatoavina manakaiky ny ankehitriny.
Arthur Holmes tamin'ny 1940 niaraka tamin'ireo teknika ireo dia nametraka ny tany tao anatin'ny 4500 tapitrisa taona.
Manomboka eto dia manohy fanazavana isika momba ireo sosona samihafa eto an-tany, momba ny firafiny anatiny
Manomboka amin'ny dian'ny kontinanta an'i Wegener mankany amin'ny tektonika takelaka, izay teôria ekena ankehitriny
Ary ny toko dia mifarana amin'ny fihenan-tsofina lehibe amin'ity vanim-potoana ity izay nandritra ny arivo taona nahamangatsiaka mandra-pahatongan'ny ranomandry feno nandritra ny 50 tapitrisa taona. Mety ho noho ny antony samihafa. Vahoaka kontinanta amin'ny toerana iray hafa izay ahitana taratra hafanana bebe kokoa fa tsy mandray azy io. Avy be ny orana ary nihetsika ny rano sy ny co2 niaraka tamin'ny vatolampy ary satria kely ny co2 dia vitsy ny hafanana tao amin'ny atmosfera ary mety hisy fipoahan'ny volkano iray izay ny lavenony dia taratry ny taratry ny masoandro ary tsy namela ny hafanana hiditra
Izy io dia mifantoka amin'i Cambrian amin'ny alàlan'ny fananganana Pangea, iray amin'ireo supercontinanta samihafa izay nisy ny fiparitahany (Gondwana9 ary avy eo amin'ny Carboniferous
Amin'ireo fandroahana dimy lehibe nitranga teto amin'ny planetantsika, 3 no niseho tao amin'ny Paleozoic
Ny famongorana, ny fçosible ary ny vanim-potoanan'ny arintany, ny gazy karbonika, ny fisehoan'ny zavamaniry eto an-tany ary ny nahatonga ny vanim-potoanan'ny ranomandry Ordovikia-Silurianina nanjary glaciation
Ahoana ny fomba fosiliny sy ny fananganana supercontinente
Ary ny fandroahana permoth mampatahotra eo amin'ny Permian sy Triassic, ny fandroahana tantara nefa izany no nanokatra ny lalana ho an'ireo dinôzôro
Nanomboka tamin'ny 250 tapitrisa taona lasa ka hatramin'ny 66 tapitrisa taona lasa. Fantatra amin'ny vanim-potoana nitondran'ny dinôzôro ny Tany.
Anisan'izany ny, Triassic, Jurassic, Cretaceous izay no tena heno ho antsika rehetra. Any Jurassic sy Cretaceous dia misy fisondrotan'ny ranomasina manan-danja.
Miseho koa ireo zavamaniry voninkazo voalohany. Ary ao amin'ny Cretaceous, miseho ny tantely.
Ao amin'ny Triassic dia hita ny biby mampinono voalohany, izay kely ny habeny ary hita koa ireo vorona voalohany izay avy amin'ny fivoaran'ny dinôzôro.
Fongana ny Triassic-Jurassic, tsy izy no malaza indrindra na dia namono 1/3 aza ny karazana teto ambonin'ny tany. Taorian'io fandroahana io dia nanomboka ny fanjakan'izy ireo ny dinôzôro.
Ao amin'ny Paleozoic dia natsangana ny ankamaroan'ny tahiry Carbon ary tao amin'ny Mesozoic ny ankamaroan'ny hydrocarbons toy ny menaka.
Fandripahana Cretaceous-Paleogene. Ny malaza indrindra, ny an'ny meteorite izay namono ireo dinôzôro. 75% ny karazana eto ambonin'ny tany nanjavona
Kavak'i Chicxulub eo anelanelan'ny saikinosy Yucatan sy ny Hoalan'i Mexico
Kilometatra manodidina ny 2 km no hanapotika ny ala, horohoron-tany nahatratra 01 na 11 ny tanjany.
Ny Cenozoic (vanim-potoana mampinono)
Midika fiainana vaovao izany. Miroso mankany amin'ny toerana misy azy ireo ny kaontinanta amin'izao vaky Pangea izao. Fotoanan'ny fampangatsiahana izao tontolo izao
Ny krizy masinin'i Messinian
Eo amin'ny farany ambanin'ny Mediterane dia misy fametrahana sira lehibe, amin'ny faritra sasany ny hateviny 3km. Heverina fa efa maina izy io na teo an-toerana nandritra ny 300.000 10 taona. Heverina fa ny faritry ny Selat Gibralatar dia nampiakatra tamin'ny fifandonana takelaka roa ary tsy nisy rano niditra. Amin'izao fotoana izao dia niditra sy nameno ny Ranomasina Mediterane, miresaka ny fiakarana 300 m isan'andro sy ny rano miditra amin'ny 1000km / ora miaraka amin'ny riandrano mihoatra ny XNUMX metatra
Nouvelle Zélande dia ho anisan'i Nouvelle-Zélande, ilay ampahany mbola mipoitra. Zeeland dia ao amin'ny Gondwana, taorian'ny niverenan'i Pangea 200 tapitrisa taona lasa izay
Ny vanim-potoana Quaternary sy ny ranomandry hafa
Astronomia sy teôria mifandraika amin'ny fivelaran'ny tany amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry quaternary. Milankovitch tsingerina izay mifehy ny toetr'andro eto an-tany
Niafara tamin'ny firesahana momba ny volkano sy ny toetrandro ary ny fiakaran'ny maripana izay ho avy izy.
Ny ho avin'ny tany
Lazao ny Anthropocene
Ny fikarohana loharanon-karena habakabaka, metaly, mineraly, rano ao amin'ny asterôida any ivelany,
Ary ny antony mety hahatonga ny faran'ny tany, ireo loza ara-jeolojika izay mandrahona antsika.
Ny sasany amin'ireo sary nalaiko niaraka tamin'ny famerenana, miaraka amin'ny kalite, amin'ny geode ary amin'ny fôsily maro
Lohahevitra manokana hahitana vaovao momba
Ilay loza vy
Ny sahan'andriamby ho mpiaro
Fitsipika fototra momba ny jeolojia nataon'i Nicolás Steno
Horohorontany tany Valdivia
1 Malahelo aho
2.1 Ny fananganana ny rafi-masoandro
2.2 Ny fananganana ny tany sy ny volana
2.3 Ny Precambrian
2.6 Ny Cenozoic (vanim-potoana mampinono)
2.7 Ny vanim-potoana Quaternary sy ny ranomandry hafa
2.8 Ny ho avin'ny tany